काठमाडौं – कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइसकेपछि नेपालमा भयाभह समस्याको रूपमा रहेको लोडसेडिङ अन्त्य भयो । नेपालमा उत्पादित विद्युत् मात्र नभई भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् वितरणको सही व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण जस्ता व्यवस्थापकीय कुशलताका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भयो ।
लोडसेडिङ अत्यका लागि नायकको भूमिका खेलेका कुलमान घिसिङसँग ‘लोकान्तर शोे’का लागि दिलनिशानी मगरले कुराकानी गरेका छन् ।
लोडसेडिङ अन्त्यपछि प्राधिकरणको ध्यान अब के विषयमा छ ? माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ ? प्राधिकरणले अरु कुन–कुन आयोजना अगाडि बढाउँदैछ ?
यी र यस्तै प्रश्नमा कुलमानको जवाफ हेर्नुहोस्, भिडियोमा :